Uyenza njani iMixholo ekwabelwana ngayo | Martech Zone
NgeCawa, ngoSeptemba 6, 2015 NgeCawa, ngoSeptemba 6, 2015 Douglas Karr
Ngokwe-New York Times Customer Insight Group kwiphepha elitsha elimhlophe, I-Psychology yoKwabelanaKukho izizathu ezi-5 eziphambili zokuba abantu babelane nge-Intanethi:
ixabiso -Ukuzisa umxholo obalulekileyo kunye nokufundisa abanye
isazisi -Ukuzichaza kwabanye
womnatha -Ukukhulisa nokondla ubudlelwane bethu
Ukubandakanyeka -Ukuzanelisa ngokwakho, ixabiso kunye nokuzibandakanya kwihlabathi
Izizathu Ukusasaza igama malunga nezizathu okanye uphawu
Ingxelo yeNew York Times luphando oluhle kwaye lubolekisa umsebenzi esiwenzayo apha eMartech. Ngelixa senza imali ngokupapashwa kwethu, indawo ngokwayo ayonelanga (nangona sifika apho). Martech Zone ibonelela ngokukhokelwa yiarhente yethu. Itekhnoloji yeNtengiso, iTekhnoloji yeNtengiso kunye neTekhnoloji ye-Intanethi iinkampani ziza kuthi ukuba zakhe ubukho bazo kwiwebhu kwaye zikhule isabelo sazo sentengiso. Benza oko ngenxa yesiseko sentembeko kunye nexabiso esibonelele ngalo ngamanqaku ethu apha.
Sijonge ngokukodwa malunga nomxholo esikhetha ukuwabhala kwaye sabelane ngawo kwaye sisebenze ukwenza okuninzi kwawo umxholo okwabelwanayo. Siyikhusela njani imithombo yolwazi (njengokufunyaniswe yiNew York Times), ubhale umxholo wethu, kwaye wenze ukuba kwabelwane ngawo?
iqonga -Ngaphambi kokuba siqale ukubhala, siqinisekisile ukuba indawo yethu iyakuxhasa ukwabelana. Imifanekiso ebonisiweyo kunye neencwadana ezityebileyo ziqinisekisa ukuba umxholo wethu ulungiselelwe ukuba sabelane nabanye. Ukuphoswa kwesi siseko kunokonakalisa owona mxholo ungowokwabiwa. Akukho mntu ufuna ukuba umsebenzi ekwabelaneni ngomxholo wakho. Yenza kube lula.
Izihloko ezinempikiswano -Idatha enempikiswano, iirantshi, kunye nokumisa ulwazi olungelulo kwabelwana ngalo ngaphezulu komndilili. Ezi zihloko ziphikisayo zihlala zisibeka ekuchaseni neenkokheli zeshishini kodwa zifumane imbeko yoontanga kunye nabathengi abanokubakho.
Imifanekiso etyebileyo -Ukongeza umfanekiso upeyinta umfanekiso omnandi engqondweni yomntu. Jonga umzekeliso esiwakhele esi sithuba. Ipeyinta umfanekiso ocacileyo oqhuba ukwazi kwaye unike indawo oya kuyo ukuba uyayenza ngaphandle kwekhonkco.
Umxholo onempembelelo -Ukuba uGoogle ubhengeza utshintsho olunokubachaphazela abafundi bethu, sabelana ngesisombululo sokugcina abafundi bethu behamba phambi kwegophe. Asabelani ngeendaba zorhwebo njengotyalo mali, utshintsho lwezikhundla, okanye ukudibana okungachaphazeli abafundi bethu.
Umxholo oxabisekileyo -Ukuba umxholo unokunyusa imbuyekezo yakho kutyalo-mali okanye unciphise iindleko zakho, siyakuthanda ukwabelana ngesisombululo okanye imveliso. Umxholo okwabelwana ngawo uqhuba itoni yotyelelo kupapasho lwethu.
kweFidi Sabelana ngesishwankathelo sentengiso kunye netekhnoloji enxulumene nokuthengisa veki nganye kwibhlog yetekhnoloji yentengiso ukuze wazi ukuba kukho izisombululo phaya ezakhelwe ngokukodwa iingxaki zombutho wakho. Ukufumanisa eziapps kusenze saba sisixhobo esithandwayo kwiiarhente, ukuthengisa kunye namasebe okuthengisa.
Education -Akwanelanga ukuhlekisa ngesisombululo, sihlala sizama ukusonga nakuphi na ukufumanisa ngengcebiso yokuba abafundi bethu baphumelele. Umxholo owenza ukuba ubomi babo bube lula kwabelwana ngawo. Ingcebiso enkulu engabizi mali kunzima ukuyifumana kwezi ntsuku!
Umgca wethegi yethu ngu Phanda, Fumanisa, Funda kwaye ezo njongo ziqhuba ukwabelana ngomxholo wethu. Ukufikelela kwethu kuyaqhubeka nokukhula ngamanani aphindwe kabini ngaphandle kokuhlawulela ukunyuselwa-ubalo olunomtsalane. Ewe, kwathatha iminyaka elishumi ukuba sifunde ezi ndlela. Ewe kunjalo-sabelana nawe nabafundi bethu! Sifuna ukuba uphumelele.
Zive ukhululekile ukuba wabelane ngomfanekiso esiwenzele ukubonisa Kutheni abantu bekhuthazwa ukuba babelane nge-intanethi:
Epreli 26, 2016 ngo-1: 44 AM
Ndiqale ukufunda oku ndingatsibeki kakhulu kodwa ndafumana okungaphezulu kunokuba bendilindele. Iingcamango ezilula nezinamandla apha. Enkosi. Ndiyathemba ukuba ndiza kukwazi ukulandela ezinye zezi 🙂